सबैलाई जगायो स्वास्थ्य महोत्सवले « Loktantrapost
सबैलाई जगायो स्वास्थ्य महोत्सवले
३ फाल्गुन २०७३, मंगलवार १०:५३
मान्छेका मनमा नै हो विचार जाग्ने, तर्क जाग्ने, इच्छा र आकाङ्क्षा जाग्ने । सयौँ झिल्काहरु मनमा छिनछिनमा तरङ्गित हुन्छन्, भइरहन्छन् । हामी कसैले पनि ती तरङ्गहरुलाई सङ्ग्रह गर्न सक्तैनौँ, पानीका फोकासरह ती उठ्तै र फुट्तै गर्छन् । सबै विचारहरुको उठान यसरी नै हँुदो हो झिलिक्क । एउटै झिल्को र एक तरङ्ग नै काफी हुँदो रहेछ कहिले काहीँ । त्यो सूक्ष्म तरङ्गलाई कार्य रुपमा परिणत गर्न सक्ता त केके हुँदो रहेछ केके ।
प्रसङ्ग के हो भने, पुस महिनाको मध्यतिर होला, एउटा कल आयो । यसो हेरेँ, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रभावशाली युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माको रहेछ । वसोबास नजिकै र नातो गहिरै भएर पनि हाम्रो बीच कमै कुराकानी र आतेजाते हुन्छ । वहाँले मलाई एउटा सल्लाहका लागि मेची ट्युन्स एफ्एम् को पश्चिमपट्टि रहेको खाली जमिनमा ४ बजेपछि आउन भन्नुभयो, म अलमलमा परेँ । केही साथीहरुलाई त्यसरी नै बोलाउनुभएको कुरा पनि जानकारीमा आयो । मैले सोचेँ– त्यो प्लटिङ भएको खाली जमिन, विश्व दाइको बोलावट, खै के हो अन्दाजसम्म गर्न सकिनँ ।
निर्धारित समयमा पुगेँ त्यहाँ । क्षेत्रीय सभापति मणि उप्रेती लगायत केही नेताहरुको उपस्थिति भइसकेको छ । विद्वत् वर्गका केही साथीहरु पनि देखिनुहुन्छ । निर्जन ठूलो चौरमा १०÷१२ टाउकाहरु । केही बेरमै विश्व दाइ पनि आउनुभयो, एउटा सानो कद र ठूलो टाउको थपियो । वहाँबाट थाहा भयो– यो देशमा विभिन्न प्रकारका महोत्सव भए । स्याउ, सुन्तला, अदुवादेखि लिएर संस्कृति, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, कला साहित्य आदि आदिका महोत्सव तर आजसम्म हाम्रो देशमा स्वास्थ्य महोत्सव भएको छैन । अब यस चौरमा भव्य स्वास्थ्य महोत्सव सम्पन्न गर्ने । विविध रोगसँग सम्बन्धित वरिष्ठ डाक्टरहरु ल्याउने । निम्न वर्गीय विरामीहरुलाई केन्द्रमा राखेर निःशुल्क उपचार गर्ने, निरन्तर ७ दिनसम्म । दिसा, पिसाब, रगत परीक्षण गर्न ल्याब पनि चलाउने । सानोतिनो चिरफार पनि गर्ने । त्यहीँ साइडमा देशका विभिन्न क्षेत्र र विधाका बुद्धिजीवीहरुलाई बोलाएर हरेक दिन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एक शीर्षकमा विचारोत्तेजक प्लानल डिस्कस चलाउने । औँलाले तोकेरै भन्नुभयो– यहाँ सचिवालय, यहाँ बिरामी बस्ने ठाउँ, यहाँ आँखा जाँच, यहाँ ल्याब, यहाँ ठूलो मञ्च, यहाँ मुटुको परीक्षण, यत्तापट्टि स्टलहरु आदि इत्यादि ।
हामी मध्ये कसैसँग वहाँले पहिले नै छलफल गरिसकेको हुँदो हो सायद । केही अनुहारहरु गम्भीर भए, केही ओठहरुले नपत्याएको जस्तो भाव व्यक्त गरे, मजस्तै केही हामी वाल्ल प¥यौँ । मेरो दिमागमा चौर वरिपरि कोठै कोठा भएका पन्डालहरु लागे, सेता कोट लगाएका, हातमा ब्रिफ केस बोकेका डाक्टरहरु गाडीबाट ओर्लन थाले, ऐया–आत्था गर्दै बिरामीहरु लाइन लाग्न थाले, मान्छेको कुँडुलो लाग्न थाल्यो । के साँच्चै सम्भव छ ? विश्व दाइले भनेजस्तो प्रथम राष्ट्रिय स्वास्थ्य महोत्व ?
दाइको अभिव्यक्तिमा हामीले पनि टाउको लगायौँ, गहन छलफल भयो । दाइले सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउनुभयो । सबैले आआफ्नो पारामा यसो गरौँ, उसो गरौँ भनेर केके केके थप्यौँ । रह्यो आर्थिक पाटो, सबैभन्दा आधारभूत विषय, लगभग २५ लाखको अनुमान भयो । स्रोतको कुरो उठ्यो, हामी चिन्तित भयौँ तर विश्व दाइ भन्नुहुन्छ– जागौँ, उठौँ, पैसा त भइहाल्ला नि । नगर सभापति इन्द्र बुढाथोकी संयोजक रहेर कार्यसम्पादन सुरु गर्ने निर्णयका साथ हामी सबै दह्रो मन बनाएर उठ्यौँ । राति पनि एक पटक मन चिसो भयो– होइन हौ, केका आँटले यत्रो काममा हात हाल्न लाग्यौँ हामी, असफल भए के होला ?
दिन बित्तै गए । हामी कयौँ पटक त्यही स्थलमा पुग्यौँ, विचार विमर्श भइरहे । कहिले चिया पसल, कहिले विलास दाइको घर, कहिले रोयल निर्भानको कफी गफ, दैनिक जसोका विभिन्न बैठक र छलफलहरु हुँदाहुँदै त हामी लक्ष्यभेदनको नजिक पुगेछौँ । महोत्सवको दिन नजिक आयो, गाउँ गाउँमा काँग्रेसले बिरामी जाँच्छ रे, निःशुल्क दबाइ पनि दिन्छ रे जस्ता आशाका स्वरहरु सुरु भए । सामाजिक सञ्जालहरु महोत्सवको लोगो र क्रिया प्रतिक्रियाले भरिन थाले । काँग्रेस इतर विचार बोक्ने खास गरेर युवा वर्गबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आउन थाले । यो त सबैको मनको महोत्सव पो होला जस्तो भयो ।
पहिले एउटा माघ ८ लाई सिङ्गै देशले पर्खेको थियो, संविधान आउने दिनका रुपमा । मेचीनगर र आसपासको क्षेत्र २०७३ को माघ ८ को प्रतीक्षा गर्न थाल्यो । पहिलो दिन वृद्ध वृदा विशेष जाँच गर्ने दिन थियो । अनुकरणीय रुपमा कार्यक्रमको उद्घाटन भयो । नेपालका एकमात्र वृद्धवृद्धा रोग विशेषज्ञ जेरियाट्रिसियन स्वास्थ्य महोत्सवको मैदानमा देखिनुभयो । यसका अतिरिक्त अन्य थुप्रै डाक्टरहरुको नियमित जाँच, रक्त समूह छुट्याउने काम, आँखाको जाँच त सातै दिन निरन्तर चल्ने सेड्युल नै थियो ।
बिरामीहरुलाई सेवा दिनु प्रमुख लक्ष्य भए पनि साथमा अन्तर विद्यालय भलिबल, हाजिरी जवाफको आकर्षण छुट्टै थियो । स्वास्थ्य र साहित्य, स्वास्थ्य र बिमा, स्वास्थ्य र खानपान, लागू पदार्थमुक्त समाज, स्वस्थ समाजका लागि राजनीति, लगायतका विषयमा गम्भीर बहसहरु सातै दिन चलिरहे । बिरामीको घुइँचो व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे प¥यो तर व्यवस्थित स्वयम्सेवक परिचालन र सही व्यवस्थापनले गर्दा अस्तव्यस्त हुन भने परेन ।
एकातिरबाट हेर्दा यो महोत्सव देशलाई हेर्ने एउटा ऐना पनि बन्यो । यस मुलुकमा बिरामीको सङ्ख्या र अवस्था के रहेछ ? नेपालीहरु कसरी रोग पालेर बाँच्न बाध्य रहेछन् ? महिला, वृद्धवृद्धाको अवस्था कस्तो रहेछ ? देशले जनस्वास्थ्यलाई कसरी हेरेको रहेछ ? बिरामीहरुको आगमन र अवस्था हेरेर विश्व दाइ हामीसँग भावुक बन्नुहुन्थ्यो, घरिघरि आँखा रसाएको पनि देख्यौँ हामीले ।
७ दिनमा लगभग १८ हजार बिरामीहरुले सेवा पाउनु अवश्य चानचुने कुरो होइन । पुण्यका खातिर ठूलाठूला पुरान लागे, बडेबडे धार्मिक अनुष्ठान चले तर लाग्दथ्यो– काँग्रेसले एउटा अत्यन्तै ठूलो पुण्य कर्म ग¥यो । त्यहाँबाट रेफर भएका कतिपय अशक्त बिरामीहरु विभिन्न अस्पतालहरुबाट निःशुल्क सेवाहरु लइिरहेका छन् । फराकिलो छाती, विद्वत् टाउको, कर्म गर्ने साहस र तत्परता भएको मान्छेमा आएको एउटा सानो तरङ्गले नै कत्रो काम गर्दो रहेछ ? प्रमाणित भएको छ यस महोत्सवबाट । समाजमा एउटा गुमेको विश्वास केही जाग्यो– राजनीतिक दलले पनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर यत्तिको जनमुखी कार्य गर्न सक्ता रहेछन् । काँग्रेसले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय महोत्सवको सफलता लगत्तै नेकपा एमालेले फागुन ९ देखि ११ सम्म ३ दिने बाल महोत्सव सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई अर्को एउटा जनमुखी कार्यक्रमको रुपमा नगरवासीहरु हेरिरहेका छन् । त्यसबाट नगर र आसपासका बहुसङ्यक बालबालिका लाभान्वित हुन सकून् । राजनीतिक दलहरुबिच सकारात्मक कार्य गर्ने प्रतिस्पर्धा बनिरहोस् । त्यसो भएमा अन्ततः देश र जनताकै हित हुने हो ।
एउटा पार्टीका मान्छेले चर्को बोल्यो भने अर्को पार्टीको मान्छेले माइक थपेर कराउने, एउटा पार्टीका मान्छेले मिठो बोल्यो भने अर्को पार्टीको मान्छेले मुखमा मह हालेर बोल्ने नराम्रो परिपाटीबाट समाज केही मुक्त होला कि जस्तो लक्षण पनि यस महोत्सवले देखाएको छ । यत्रो कार्यक्रममा दलको झन्डा नहुनु, काँग्रेस इतर व्यक्तिहरुको पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइनु, कतिपय मेजर ठाउँमा पार्टी सदस्यताधारी बाहेकले पनि अवसर पाउनु, सबै खाले दलका मान्छेहरु बिना हिच्किचाहट हार्दिक ढङ्गले सहभागी हुनुले एउटा राम्रो कल्चर स्थापित हुन खोजेको देखिएको छ ।
समग्रमा नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय महोत्सवले सबैको मन जितेको छ । सत्ता र कुर्सीको जोड घटाउ तथा घिनलाग्दो खेलमा मात्र सीमित नरहेर यसरी जनताको मन जित्ने सकारात्मक प्रतिस्पर्धामा आएर समाजलाई समृद्ध बनाउन र वर्तमानमा जनतामा पलाएको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा हटाउन सबै दलहरुसँग आग्रह गरुँ कि जस्तो पनि लागेको छ ।